ရုရှား ယူကရိမ်း စစ်ပွဲ အတွက် ပူတင်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် စဉ်းစားစရာတွေ ပေါ ်လာခဲ့ပြီ – MMOnlineNews
ရုရှား ယူကရိမ်း စစ်ပွဲ အတွက် ပူတင်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် စဉ်းစားစရာတွေ ပေါ ်လာခဲ့ပြီ
08/03/2022 08/03/2022 747	0 Comments
ယူကရိမ်းစစ်ပွဲ (၁၃) ရက်မြောက်ပြီမပြီးသေးဘူး၊ ရုရှားစစ်ဆင်ရေးဟာဝေဖန်စရာဖြစ်လာပြီ၊အကြောင်းကလည်းရှိထားတယ်။ယူကရိမ်းကိုအမေရိကန်၊ နေတိုးနောက်ကွယ်က ကူညီနေတာတွေရှိတယ်၊
– ယူကရိမ်းစစ်ဆင်ရေးကို ဘိုင်ဒင့်အနေနဲ့ (၃) လကျွုသိနတော- ယူကရိမ်းကို ဝိုင်းထားပြီး ဘေဂျင်းအိုလံပစ်ပြီးမှ စတိုက်တာတွေဟာတဖက်ကို ပြင်ဆင်ချိန်တွေ အများကြီး ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်၊
( ဒီနေရာမှာ ဘိုင်ဒင်နဲ့ ရှီအဆက်အစပ်ဟာ သံသယတခု ဖြစ်စရာလားလို့မေးရမလို ) စစ်ရေးသတင်းပေါက်ကြားတယ်ဘိုင်ဒင်ကြိုသိတဲ့ (၃) လဟာ (၃) ရက်နဲ့ယူကရိမ်း အလံဖြူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တွက်ချက်မှုကို (၁၃) ရက်အထိမပြီးဆုံးအောင်အလှည့်အပြောင်းတခုဖြစ်စေတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်လိမ့်မယ်၊
“ထောင်” ပေါင်းများစွာသော ရုရှားလေထီးစစ်သားတွေ အများစုဟာ ဘာကြောင့် Sniper စာမိကြရတာလဲ ? – အထူးတပ်ဖွဲ့ Special units တွေ ချေချင်ညာက အထူးအဖွဲ့တွေ ဘာကြောင့် အသုတ်သင်ခံ၊ ကြိုတင် အဖမ်းခံ ခြေမှုန်း ခံကြရတာလဲ၊ –
ဘာကြောင့် ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရမှု များပြားခဲ့ရသလဲ ?မနေ့က တင်လိုက်တဲ့ရုရှား-ယူကရိမ်း (၂) ဖက်ဆုံးရှုံးမှုစာရင်းမှာရုရှားဖက်က အတော့်ကို ပိုပြီးဆုံးရှုံခံနေရတာတွေ့ရတယ်၊
အကြမ်းအားဖြင့် ( ရုရှား-ယူကရိမ်း ) ဆုံးရှုံးမှုက ( 1:4 )ရှိသင့်တဲ့အစား ( 4: 1 ) ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်၊ယူကရိမ်းရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဒီလောက်မကောင်းဘူး၊ CIA နဲ့ NATO ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးတင်းတွေ ယူကရိမ်းကိုပံ့ပိုးပေးနေတာလို့ ယေဘူယျ မှတ်ချက်ပြုနိုင်တယ်၊
ရုရှားတောင်းတာကိုကြည့်ဦး – ယူကရိမ်းဖက်က စစ်ရေးရပ်ပေးရမယ် ( Cease military action ) – ယူကရိမ်းရဲ့ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ဘက်မလိုက်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပြင်ရမယ်၊( Change its constitution to enshrine neutrality )-
ခရိုင်းမီးယားဟာ ရုရှားပိုင်နက် ဖြစ်ကြောင်း ယူကရိမ်းက အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ ( Acknowledgment on Crimea as Russian territory ) – Donetsk နဲ့ Lugansk ကို လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်၊
( Recognise the separatist republics of Donetsk and Lugansk as independent territories. )ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ပဲတောင်းရသလဲ ?ကိယက်ကို မသိမ်းနိုင်တော့လို့လား ?ပထမပိုင်း…
ကိယက်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးယခင်သမ္မတဟောင်းကို နန်းတင်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ ?ကောင်းပြီဇလန်စကီးကသာ လိုက်လျောလိုက်ရင်ပူတင့်ပုံရိပ် ဘယ်ရောက်သွားမယ်ထင်လဲ ?
မဟုတ်သေးဘူး ကိုပူတင်ရေဒိလောက်တောင်းတာများတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရုရှားဖက်က အလံဖြူတဝက်ထောင်ပြလိုက်သလိုပဲလို့ ယူဆစရာဖြစ်လာတယ်၊Sanction တွေကိုရပ်ပေးမယ်ထင်လို့လား ?ပိုတောင်မှ ဖိလာဦးမယ်၊ကိယက်အစိုးရကိုမပြောင်းမနိုင်ခြင်းခင်ဗျားရည်မှန်းချက် မပေါက်မြောက်သေးဘူး၊ဒီစစ်ရဲ့ဗဟိုကကိယက်အပြင်ဘာမှမရှိရဘူး၊
← ဟက်ကာ အဖွဲ့တွေက ရုရှားရဲ့ လျှပ်စစ်ကား အားသွင်းစက် ကွန်ရက်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီ
အမေရီကန် လေတပ်၏ A-10 warthog နေရာတွင် အစားထိုး အသုံးပြုမည့် A-14 wild wolf ရဲ့ ရှေ့ ပြေးတိုက်လေယာဉ် ပုံစံ များ →